Ezivamile amathawula sanitary - into ijwayelekile cishe bonke abesifazane. Zonke amantombazane aneminyaka engaphezu kwe-30 kufika kanye ngenyanga ukusebenzisa pads. Ngeshwa, iningi ubulili fair kukhona ayifanele kukhethwa umkhiqizo ngokunakekela ngenxa. Kungenxa lezi amantombazane futhi yakhelwe lesi sihloko ngoba njalo ophoqelelwe ukuthenga pads "Naturella", "Olveys" noma yimuphi omunye.
Bambalwa abantu bazi, kodwa izinga ezinhle ngempela futhi pads bavame ukuvikela abesifazane ezifweni sabesifazane. Kodwa umkhiqizo yekhwalithi ephansi, ngokuphambene, uyakwazi ukubangela isifo kakhulu. Ngokwezibalo, 80% of the ubulili fair okungenani kanye empilweni yakhe sibhekene izifo zabesifazane, lapho u-60% amantombazane izifo idatha zazibangelwa ngokunembile gasket noma swab. Kodwa sihlala ophoqelelwe ukusebenzisa lo mkhiqizo.
Indlela ukuhlukanisa umkhiqizo izinga
Kungakhathaliseki ukuthi uthanda: gasket "Naturella", "Libress" noma yini enye - Kunoma yikuphi, kumelwe sihlangabezane nezimfuneko ezithile. Uma eliphansi napkins, futhi le ntombazane azikwazi ukuthinta okugcwele ayeqiniseka ngayo, futhi esesikhathini kubaluleke kakhulu. Ngakho pads "Naturella" futhi yikuphi okukhona kwabanye kufanele:
Inikeza ukumuncwa ephumelelayo fast and.
Gcina topsheet ezomile.
Ayashesha ukubamba iphunga futhi akavumeli kubo.
Ukuba topsheet ukhululekile futhi ezithambile.
It is ezenziwe ngezinto ezinhle, ngaphandle ukuthi kungenzeka ukuvuza.
Ungavumeli nezilwanyana ezincane ukuze wande.
Gaskets "Naturella": Izibuyekezo
Ngaphambi kokusebenzisa umkhiqizo omusha, njalo ufuna ukuzwa izindaba isipiliyoni zabanye abantu. Ngokwesibonelo, gaskets "Naturella", okuyinto has a isithombe esihlokweni, iningi abesifazane wayemthanda futhi ukhuluma ngabo kahle. Abantu abaningi bayajabula ukuthi ube nendlela eyodwa, kodwa izinzuzo eziningana:
Ukuthamba. Lo mkhiqizo elithambile ukuze akubangi ukucasuka noma bezihlikihla isikhumba olubucayi. Lemisebenti ingaphindze esetshenziswa emva kokubeletha, ngisho noma ngesikhathi sokuzalwa Ngangikhala izinyembezi, episiotomy noma obelethisayo benza, wasala ezivuzayo.
Ukuvikeleka iphunga. Gaskets "Naturella" hhayi kuphela ivikeleke kakhulu ngokumelene iphunga, kodwa futhi babe iphunga ecashile ezimnandi. Ngenxa yalezi amanothi ezimibalabala owesifazane uzizwa eqiniseka kakhudlwana.
emaphaketheni ngamunye. Ngamunye pad ku iphakethe has a iphakethe ehlukile evumela ukuthi ukuba inzalo. Enye inzuzo yokuhamba kwesikebhe ukuthola futhi yini esikhwameni labesifazane manje ingenza umuntu Shim, kunokuba wonke iphakethe sisonke, ngaphandle kokuba kudingeke sikhathazeke ukuphepha kwayo, inhlanzeko inzalo.
Inani. Naphezu eliphezulu, intengo lezi pads kwamukelekile ngempela. Abakwazi njengomuntu wesifazane ibhizinisi, futhi abafundi abavamile.
Comfort. Ngenxa mnene chamomile akhiphe, okuyinto kuqukethwe lezi pads, abazi zibangele komzimba kanye ukucasuka.
Sockeye caviar: izithombe, izakhiwo. Iyiphi indlela engcono kakhulu nezibiliboco - salmon noma sockeye?
Kuyini ukhonkolo geopolymer?
Cocktail impilo garlic ulamula
Ukufakwa odongeni panel: izinzuzo ubuchwepheshe